Uhlalutyo lwase China lokungaphumeleli okuqhelekileyo kwehydraulic synchronous motors Umvelisi kunye noMthengisi | Guorui
Eyona nto iphambili ichaphazela impazamo yolungelelwaniso lweemoto ezihambelanayo Imoto yolungelelwaniso yenziwe ziinjini ezininzi ngokuchaneka okuphezulu koomatshini kunye nobukhulu obufanayo. Ubungakanani obufanayo kunye nokuchaneka kokuchaneka okuphezulu kwenza ukuhamba (ukufuduswa) kwimoto nganye ngokulinganayo. Ngaphaya koko, ngenxa yokuba indawo enqamlezayo (okanye ukubekwa endaweni) yeactuator iyafana, ukungqinelanisa isantya kuyaphunyezwa. Iimoto ezihambelanayo zinokuchaneka okuphezulu, kodwa kusekho iimpazamo ezibonakalayo ekusetyenzisweni kwangempela. Ukuchaneka kokungqamanisa kuchaphazeleka ikakhulu kwezi zinto zilandelayo:
1) Machining ukuchaneka Motors kunye actuators;
2) Ukufana komthwalo;
3) Uyilo lombhobho;
4) Umxholo wegesi phakathi.
Ngenxa yezi zizathu zingasentla, kukho iimpazamo ezibonakalayo ekusetyenzisweni kweemotor ezihambelanayo. Ke ngoko, ukusombulula impazamo yolungelelwaniso lweemoto ezihambelanayo, kuyafuneka ukuba usombulule ezi ngxaki zingasentla kwaye usebenzise isithuthi esihambelanayo ngokuchanekileyo nangokufanelekileyo.
Amanyathelo okuphelisa ukungqinelani kweempazamo
1.Ukukhetha imoto yolunye kunye nokusebenza ngokuchanekileyo okuphezulu kunye nokuchaneka kokuqhubekeka kweemoto ezihambelanayo kunye ne-actuator emisela ukungqinelana ngokuchanekileyo kwenkqubo. Ke ngoko, ukukhetha umenzi ofanelekileyo ngumcimbi obalulekileyo. Ukuba ukuchaneka kwecandelo kuqinisekisiwe, ukuchaneka kokungqamanisa kwenkqubo kunokuqinisekiswa ngokulula. Ukufuduka kwenjini ehambelanayo kuyafana, kwaye indawo enqamlezileyo ye-actuator iyafana, kwaye ukuchaneka kokuvumelanisa kuphuculwe kakhulu.
2.Yisusa impazamo eyongezelekileyo yemoto ehambelanayo
Nangona ukuchaneka kokuchaneka kweemoto ezihambelanayo kuphezulu kakhulu, akunakufana ngokuchanekileyo. Ukuba inqanaba lokuhamba likhulu, inqanaba lokuhamba kwamanzi lihlala likhulu, Oko kukuthi, impazamo eyongezelekileyo yokuchaneka kokungqamanisa iya kwenziwa. Ngokukodwa xa intshukumo ye-actuator ikuluhlu lokuhamba, le mpazamo inyukayo inkulu ngakumbi. Kuyabonakala kumzobo 1 ukuba, kwisekethe nganye yeoyile ngaphakathi kweemoto ezihambelanayo, kukho iqela levalve eliqulathe ivelufa yokuphuphuma 2 kunye nevalve yendlela enye. Eli qela levalve lisetelwe ukuphelisa imeko ye-asynchrony error. Imoto ehambelanayo ngokubanzi kufuneka ilawule ii-actuator ezininzi.
Ukukhethwa kwehashe leSynchronous kunye nokuthelekisa umthwalo
Ivalve yokunceda yemoto ehambelanayo inokuphelisa impazamo yokuvumelanisa ngaxeshanye, sinokubona ukuba uxinzelelo olubekwe yivalve yokunceda nayo ibaluleke kakhulu. Ukucwangciswa koxinzelelo kufuneka kuhambelane nomthwalo. Ukuba uxinzelelo lubekwe phezulu kakhulu, impazamo yokuvumelanisa ayinakususwa; ukuba uxinzelelo lubekwe phantsi kakhulu, umthwalo awunakulinganiswa. Xa ezinye ii-actuator zityhala umthwalo omkhulu, ioyile yoxinzelelo iya kuba luxinzelelo oluphezulu, kwaye ivelufa yokugcwala iya kuqala ukuphuphuma. Ngale ndlela, ii-actuator ezininzi ziya kunyuka zisihla, ezinokubangela i-asynchrony enkulu, kwaye zinokubangela neengozi zezixhobo. Ke ngoko, okokuqala, jonga ukuba umthwalo awunakukhetha ngokugqithileyo, kwaye okwesibini, setha uxinzelelo lokugcwala kwevalve yokuhambahamba kweemoto.
4. Amahashe ahambelanayo achatshazelwa luxinzelelo lwemibhobho
Ukucwangciswa kwemibhobho ukusuka kwindawo ehambelana nemoto ukuya kwi-actuator nayo kufanelekile, kungenjalo iya kuba nefuthe. Kuba ilahleko yoxinzelelo lombhobho ikwankulu kakhulu, xa ilahleko yoxinzelelo idityaniswa nokuphambuka komthwalo, uxinzelelo oluphezulu kakhulu luya kwenziwa ngaphakathi kombhobho. Ukuba umahluko woxinzelelo phakathi kokungena kunye nokuphuma kweemoto kutshintsha kakhulu, ke ngesantya esifanayo, ukufuduswa kweenguqu zemoto. Ke ngoko, sizama konke okusemandleni ukuhlengahlengisa umgama, uhlobo lwengqiniba, ububanzi bombhobho, njl.